Nkọcha L-carnitine (541-15-1) HPLC≥98% | AASraw Fat Loss
/ ngwaahịa / Ọla abụba / L-carnitine ntụ ntụ
SKU: 541-15-1. Category: Ọla abụba
AASraw nwere njikọ na mmepụta site na gram ka usoro nchịkọta nke L-carnitine ntụ ntụ (541-15-1), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkọta mma.
L-carnitine ntụ ntụ video
Raw L-carnitine ntụ ntụ isi agwa
Molekụla Formula: C7H15NO3
Ọbara arọ: 161.2
Raw L-carnitine ntụ ntụ eji
Raw L-carnitine ntụ ntụ Aha
Ụdị ọgwụ nke L-carnitine bụ 500-2,000 mg kwa ụbọchị.
Ọ bụ ezie na usoro onunu ogugu di iche site na omumu na omumu, nke a bu nkowa nke ojiji na dose maka uzo obula:
(1) Acetyl-L-Carnitine: Ụdị a kachasị mma maka ụbụrụ na ahụike na ọrụ. Ihe dị iche iche na-agbanwe site na 600-2,500 mg kwa ụbọchị.
(2) L-Carnitine L-Tartrate: Ụdị a dị irè maka mmega ahụ. Ihe dị iche iche na-agbanwe site na 1,000-4,000 mg kwa ụbọchị.
(3) Propionyl-L-Carnitine: Ụdị a kachasị mma iji meziwanye ọbara na ndị nwere ọbara mgbali elu ma ọ bụ ọnọdụ ahụike metụtara. Ihe dị iche iche na-agbanwe site na 400-1,000 mg kwa ụbọchị.
Dabere na nyochaa nyocha ahụ, ruo 2,000 mg (2 grams) kwa ụbọchị dị mma maka iji oge dị ogologo na ọgwụ dị irè maka ọtụtụ ụdị L-carnitine.
Ịdọ aka ná ntị na larịị L-carnitine
Ndị ọzọ ọgwụ ọjọọ nwere ike imekọ ihe na levocarnitine, gụnyere ọgwụ ọgwụ na ọgwụ ndị na-ere ọgwụ, vitamin, na mkpụrụ osisi. Gwa onye ọ bụla n'ime ndị na-elekọta gị ahụike gbasara ọgwụ niile ị na-eji ugbu a na ọgwụ ọ bụla ị malitere ma ọ bụ kwụsị iji.
Raw L-carnitine ntụ ntụ Ntuziaka ọzọ
Dị ka ọtụtụ ihe mgbakwunye anụ ahụ, L-carnitine yiri ka ọ dị mma n'enweghị nsogbu dị oké njọ ma ọ bụrụ na ejiri ya mee ihe na dịka a gwara ya.
Otu nnyocha tụlere nchekwa L-carnitine site n'inye ndị na-eme 3 grams kwa ụbọchị maka ụbọchị 21. A na-eduzi usoro nchịkwa ọbara zuru oke maka onye ọ bụla nọ na mmalite na njedebe nke ọmụmụ ihe ahụ, ọ dịghịkwa nsogbu ọhụụ a hụrụ.
L-carnitine ụkọ ntụpọ
Raw L-carnitine ntụ ntụ Marketing
Otu esi azụta L-carnitine ntụ ntụ si AASraw
Kedu uru nke L-carnitine na L-carnitine ntụ ntụ?